४९.०४ अंकले घट्यो बजार, सबैभन्दा बढी विकास बैंकका शेयरधनीले गुमाए | आर्थिक अभियान
४९.०४ अंकले घट्यो बजार, सबैभन्दा बढी विकास बैंकका शेयरधनीले गुमाए
मंसिर १६, काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीवार नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १ दशमलव ८६ प्रतिशत अर्थात् ४९ दशमलव शून्य ४ अंकले घटेको छ ।
नेप्से परिसूचक २ हजार ५८४ दशमलव ६१ विन्दुमा झरेको छ । यो दिन कारोबारमा आएका २३१ ओटा धितोपत्रको ७९ लाख ३२ हजार ७३१ कित्ता शेयर ४७ हजार ८६४ पटकमा रू. ३ अर्ब ४१ करोड ३५ लाख ८९ हजार १२६ खरीदविक्री भएको छ ।
कारोबारमा आएका २३१ ओटा धितोपत्रमध्ये दुई ओटा धितोपत्रको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सामलिङ्ग पावर कम्पनी र न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ९ दशमलव ९९ प्रतिशत वृद्धि भएसँगै सकारात्मक सर्किट लागेको हो ।
सामलिङ्ग पावरको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ५०७ दशमलव ५० र न्यादी हाइड्रोपावरको रू. ४१३ दशमलव १० पुगेको छ ।
त्यसैगरी सबैभन्दा बढी कर्पोेरेट डेभलपमेण्ट बैंकको शेयरमूल्य घटेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा यो दिन ६ दशमलव ८० प्रतिशतले घटेको हो । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू.९१३ दशमलव ४० मा झरेको छ ।
यसैगरी दोस्रोमा मैलुङ खोला जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमूल्य ६ दशमलव ७५ प्रतिशतले घटेर रू. ५२५ मा झरेको छ । बिहीवार सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री महालक्ष्मी विकास बैंकको भएको छ । कम्पनीको रू. १२ करोड ४३ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ । त्यसैगरी दोस्रोमा हिमालयन डिष्टीलरी लिमिटेडको रू. ११ करोड ७९ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
कारोबारमा आएका १३ ओटा समूहमध्ये सबै समूहको परिसूचक घटेसँगै समग्र नेप्से परिसूचक घटेको हो । सबैभन्दा बढी विकास बैंक समूहको परिसूचक ३ दशमलव ८२ प्रतिशतले घटेको छ ।
यो दिन अधिकांश विकास बैंकहरुको शेयरमूल्य घटेसँगै उक्त समूहको परिसूचक घटेको हो । त्यसैगरी बैकिङ समूहको परिसूचक १ दशमलव शून्य १ प्रतिशत, व्यापार समूहको १ दशमलव २९ प्रतिशत,होटल एण्ड टुरिजम समूहको १ दशमलव ९७ प्रतिशत,हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक २ दशमलव २ प्रतिशत, वित्त समूहको ३ दशमलव ७६ प्रतिशत,निर्जीवन बीमा समूहको २ दशमलव शून्य ९ प्रतिशतले घटेको छ ।
त्यस्तै उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको २ दशमलव ४९ प्रतिशत,अन्य समूहको परिसूचक ३ दशमलव ६४ प्रतिशत,लघुवित्त समूहको परिसूचक १ दशमलव ६६ प्रतिशत,जीवन बीमा समूहको १ दशमलव ६५ प्रतिशत, म्युुचुअल फण्ड समूहको १ दशमलव २८ प्रतिशत र लगानी समूहको परिसूचक १ दशमलव ७१ प्रतिशत घटेको छ ।